Imaaraadka Carabta oo ciidamo ay tababareen ku wareejisay Taliska Ciidanka xoogga dalka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Imaaraadka Carabta oo ciidamo ay tababareen ku wareejisay Taliska Ciidanka xoogga dalka * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Imaaraadka Carabta oo ciidamo ay tababareen ku wareejisay Taliska Ciidanka xoogga dalka
By A warsame on 1st November 2017
Imaaraadka Carabta ayaa Tababar ugu soo gaba gabeysay magaalada Muqdisho 311 askari oo bilihii la soo dhaafay tababar ku qaadanayay xero ciidan oo ay maamulaan.
Munaasabad ka dhacday Xerada Jeneraal Gordan ayaa Safiirka Imaaraadka Carabta waxaa uu ku wareejiyay Taliska Ciidanka xoogga dalka Ciidamadan gaaraya 311 askari oo qalabkooda u dhameystiran yahay.
Munaasabadda ayaa waxaa goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya Xasan Cali Kheyre, Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jen. C/wali Jaamac Gorod, Safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Danjire Maxamed Cusmaan Xamaadi.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa uga mahad celiyay Imaaraadka Carabta, sida ay u taageerto Ciidamada xoogga dalka, waxaana uu xusay in ciidamadan ay ka qeyb qaadan doonaan dagaalka la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin.
Ciidamadan gaaraya 311 askari ayaa loo dhameystiray hub iyo gaadiid dagaal, waana markii u horeysay ee Imaaraadka Carabta ciidamo ay tababaraan ku wareejiyaan Taliska Ciidanka xoogga dalka, halka markii hore ciidamada ay tababareen ay amnigooda sugayeen xeradooda iyo safaaradooda.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday howl gal ka dhan ah Al-Shabaab, waxaana ay sheegtay in ciidamada kala duwan ee qalabka sida ka qeyb qaadanayaan howl galada.